Mashandisiro eDhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (I) | Ndinobva mac
Mashandisiro ekushandisa Dhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (I)
Yakafananidzwa | | Tutorials
MuIOS 10, iyo Meseji app yagamuchira iyo Dhijitari Kubata chimiro, chinongedzo chekutaurirana icho chaimbove chakaganhurirwa kuOSOS. Uine Dhijitari Kubata, unogona kutumira madhirowa, kurova kwemoyo, fireballs, kutsvoda uye nezvimwe kushamwari dzako uye nemhuri, zvese nekungobata zvishoma.
Pamusoro pezvo, sketches, kurova kwemoyo, kutsvoda, uye mamwe mameseji akagadzirwa neDigital Kubata pa iPhone anogona zvakare kutariswa paApple Watch, uye zvinopesana. Izvi zvinowedzera nzira dzatinogona kutaura isu pachedu. Ngatione kuti zvinoshanda sei.
1 Kuwana kune Dhijitari Kubata
3 Annotate muMifananidzo uye Mavhidhiyo
Kuwana kune Dhijitari Kubata
Vhura iyo Messages app pane yako iPhone.
Vhura hurukuro iripo kana kutanga imwe nyowani.
Bata iyo icon inozivikanwa neminwe miviri pamwoyo.
Dzvanya pamuseve wekurudyi kuti uwedzere iyo Dhijitari Kubata hwindo.
Unogona kutumira mameseji nemadhirowa uchishandisa diki interface iyo inotsiva iyo keyboard, asi ikozvino wave nenzvimbo yakawanda, iyo skrini yese yeiyo iPhone.
Iyo Dhijitari Kubata interface inotsigira akasiyana ekubata-based gestures, iwe unogona kudhirowa kana kunyora uchishandisa munwe mumwe uye kunyange kutara mapfupi mavhidhiyo neyakaisanganisira vhidhiyo chishandiso.
Kudhirowa neiyo Dhijitari Kubata chimiro, ingo tanga kudhirowa mubhokisi dema, inoonekwa mune ese akajairwa maitiro maitiro uye yakazara skrini mode. Paunenge uchishandisa yakajairika kuona, tinya padenderedzwa diki kuruboshwe kuruboshwe rwechiso kuti uone akasiyana mavara sarudzo. Mune yakazara skrini mode, iwo mavara anowanikwa kumusoro.
ZANO: ku kuwana mavara etsika, gadzira yakadzvanywa kwenguva refu pane chero eeruvara swatches. Vhiri vhiri rinozovhurwa nemhando yakasarudzika sarudzo kuita ako madhirowa asarudzika.
Pane iyo Apple Tarisa, Dhijitari Kubata mifananidzo inotumirwa nekukurumidza kana iwe wabvisa munwe wako pachiratidziro kwemasekondi mashoma, asi pane iyo iPhone nePad, iwe unogona kutora nguva yako nekuti madhirowa haatumirwe kudzamara wabaya museve wekutumira.
Iye munhu anogamuchira dhiraini yako yakagadzirwa neDhijitari Kubata anozoiona sekunge iwe uri kuzviita munguva chaiyo, sezvamakaita. Zvakafanana nevhidhiyo inoratidza maitiro awakateedzera kupedzisa dhizaini yako.
Uye kana iwe uchinge wagamuchira dhizaini yakagadzirwa neDhijitari Kubata kuburikidza neMeseji, tinya pairi uye iwe uchakwanisa kuiona yakazara skrini.
Annotate muMifananidzo uye Mavhidhiyo
Chinhu chakasarudzika cheDhijitari Kubata pa iPhone uye iPad kugona tora mafoto kana kurekodha mapfupi 10-echipiri mavhidhiyo anogona kududzirwa uchishandisa zviripo maturusi. Aya ndomaitiro aunozviita iwe:
Mune iyo Dhijitari Kubata interface, tinya pane kamera kamera.
Sarudza iyo yekumberi kamera kana main back kamera nekutepa idiki kamera kamera pazasi kurudyi rwechidzitiro. Iyo yekumberi kamera ndiyo yakasarudzwa.
Dhinda bhatani dzvuku kuti utange kurekodha. Ipo vhidhiyo iri kutorwa, unogona kushandisa maturusi eDhijitari kudhirowa aunoona kumusoro.
Neimwe nzira, kana iwe uchida kudhirowa pachiratidziro usati watanga kurekodha, ingotanga kudhirowa nechigunwe chimwe. Paunenge wapedza, tinya bhatani rekutanga kurekodha uye vhidhiyo yacho ichazonyorwa yakabata mufananidzo uri pamusoro payo.
Kuti utore pikicha, tinya bhatani chena pachinzvimbo chebhatani dzvuku. Ipapo iwe unogona kutanga kudhirowa nekunyora zvirevo sekunge yaive vhidhiyo. Iyo system yakafanana chaizvo.
Kunze kwekudhirowa pamifananidzo nemavhidhiyo, unogona zvakare kushandisa zviito zvekuwedzera kurova kwemoyo, kutsvoda, uye zvimwe.
Dhinda museve webhuruu kutumira mufananidzo kana vhidhiyo kana uchinge wapedza.
Sezvauri kuona, iyo Dhijitari Kubata basa inopa kwakawanda kutamba kune edu hurukuro mune yakavandudzwa Meseji app yeIOS 10. Asi kuchine zvimwe zvakawanda, saka usapotsa chikamu chechipiri cheichi posvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Mashandisiro ekushandisa Dhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (I)
Mashandisiro ekushandisa Dhijitari Kubata muMameseji neIOS 10 (II)